Intanet Halal? Emebere ihe nchọgharị 'Sharia' na Malaysia
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Intanet Halal? 'Sharia-Dabara' web nchọgharị ulo oru na Malaysia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Intanet Halal? 'Sharia-Dabara' web nchọgharị ulo oru na Malaysia
Ulo oru nke Internetntanetị nke hiwere iwu nke Sharia ka emepere na Malaysia - tinyere ihe nchọgharị, nkata na ọrụ sadaqah.
Mbido Malaysia SalamWeb na-achọ ịmepụta Halal web-ahụmịhe maka ndị Alakụba gụnyere izi ozi, nchọgharị na ozi ọma, edepụtara site na njirimara onye ọrụ, iji dabaa na iwu Alakụba.
Dị ka onye ọ bụla nọrọ oge zuru ezu na Facebook ma ọ bụ Twitter nwere ike ịgwa, a gaghị enwe ike ịkọwa mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ dị ka ebe dị mma maka ndị na-anwa ịmegharị dịka ụkpụrụ Islam siri ike, nke na-amachibido ọkacha mmasị weebụ dị ka ịgba chaa chaa, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mmemme. nke ị drinkingụbiga mmanya ókè. Na ebe a ka ụlọ ọrụ ọhụụ chọrọ ịba uru, na-esetịpụ nnukwu ebumnuche nke ijide ahịa na opekata mpe 10% nke ndị Alakụba 1.8 n'ụwa.
"Anyị chọrọ ime ka ịntanetị bụrụ ebe ka mma," onye isi njikwa ihe omume ahụ bụ Hasni Zarina Mohamed Khan kọwara, dị ka Bloomberg si kwuo. "Anyị maara na ịntanetị nwere ihe ọma na ihe ọjọọ, yabụ SalamWeb na-enye gị ngwaọrụ iji mepụta windo a nke ga-enyere gị aka ịntanetị iji hụ ihe ọma."
Usoro ihe omume a nwere ọtụtụ atụmatụ nke na-egosi n'ụzọ doro anya “iji bulie ụzọ ndụ Alakụba” gụnyere ndị na-ekpe ekpere, compass nke na-ezo aka Mecca na nzacha nke na-ezere mmanya na azụmaahịa metụtara anụ ezi. Ọ bụ ihe nchọgharị mbụ nke International Sharia Supervisory Board kwadoro ka ọ bụrụ onye na-akwado iwu Islam.
Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ndị Alakụba ka ọrụ ahụ na-arụ. The Reddit-dị ka obodo usoro nke nkpado na ịtụ vootu ebumnuche na "na-akwalite ụkpụrụ nile nke ụwa," na-adọ ndị ọrụ aka ná ntị mgbe ha na-agakwuru ọdịnaya nke a na-egosi dị ka mkparị ma ọ bụ wayo.
Dika Facebook na Google na-enyocha nyocha banyere nsogbu nzuzo na nchedo, ihe nzacha nke ndi ozo nwere ike ichoro karia.
Ọ bụ ezie na SalamWeb yiri ka ọ na-enye ahụmịhe afọ ofufo iji nyere ndị ọrụ aka nyocha dị ka nkwenkwe ha si dị, njikọta nke Okpukpe na teknụzụ anaghị adịkarị mma. N'ọnwa Nọvemba gara aga, Indonesia weputara ngwa nke na enyere ndị ọrụ aka ịgwa gọọmentị nke ndị na-eme "nkwenkwe ndị jụrụ okwukwe" ndị steeti na-amataghị.